India Tourism Yekuenda Kwose Kuburikidza Nemufirimu, Mitambo, Chitendero, Kugara, Kushanda
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » India Tourism Yekuenda Kwose Kuburikidza Nemufirimu, Mitambo, Chitendero, Kugara, Kushanda
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • Sports • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
India Tourism pane yakatarwa
Gurukota reKabineti reHurumende yeUttarakhand, Satpal Maharaj, vataura nhasi kuti hurumende yenyika yawedzera rubatsiro rwakasiyana rwemari nemari kuchikamu chekushanya uye yatora matanho akati wandei ekuibatsira.
Pakeji ye200 rupees macrores akarongedzwa kune COVID-akanganisa-vanopa sevhisi sevashanyi vevashanyi vafambi uye mafambiro ehova, pakati pevamwe.
Kuronga kuri kuitika mumatunhu ese muIndia kumutsidzira kushanya kuburikidza nenzira dzakasiyana senge firimu nemitambo, chitendero, uye nzvimbo dzekugara uye mashandiro.
Sachigaro weFICCI akati kufamba, kushanya, uye kugamuchira vaenzi ndizvo zvakatanga kutambura uye pamwe ndivo vekupedzisira kupora.
Vachitaura musangano weValedictory we2nd Travel, Tourism & Hospitality e-Conclave: Resilience & Iyo Mugwagwa weKudzoreredza wakarongwa neFICCI, VaMaharaj, Gurukota rezveKudiridzira, Kudzora Mafashama, Kudiridza Kudiki, Kukohwa Kwemvura Yemvura, Kutungamira Kwemvura, Indo- Nepal Uttarakhand River Projects, Tourism, Pilgrimage & Religious Fairs, tsika nemagariro, yakati mitemo yakasiyana siyana yakaitwa nehurumende kubatsira chikamu kumuka.
“Pakati pemitemo pamwe nerubatsiro rwakaitwa nehurumende, nyika inopa mitemo yekukwezva nekutsigira indasitiri yemafirimu kupfura mukati Uttarakhand. Pamusoro pezvo, isu takapa rubatsiro rwe INR 10 lakhs munzvimbo dzine makomo uye INR 7.5 lakhs mumapani ari pasi peDeendayal Homestay Yojana. Dzimba dzekugara 3,400 dzakanyoreswa pari zvino pasi pechirongwa ichi, ”akadaro.
Uyezve, kutaura nezve zvazvino kuitika mukushanya, VaMaharaj vakati vanhu vari kutarisirawo kugara kumabasa nekushanda. “Pasi pa Veer Chandra Singh Garhwali Yojana, takatanga kunyoresa pamhepo. Takagadzirawo maseketi akasiyana kusimudzira mafambiro emuno, ”vakadaro.